मानसिक तनावले मुटुलाई कसरी असर पुर्‍याउँछ ? सबैले जानीराखौं – Ramailo Sandesh
तनाव बिनाको मानिस नै हुँदैन। मानिसमा कुनै न कुनै तनाव हुन्छ नै। अलि-अलि मानसिक तनाव हुनु स्वभाविकै पनि हो। व्यक्तिमा कार्यसम्पादनको अलि-अलि तनाव भयो भने मानिस जोसजाँगरका साथ नतिजा ल्याउन उद्दत हुन्छ। तर, यहि तनाव आवश्यकताभन्दा बढी भयो भने ‘डिप्रेसन’को रूप लिनसक्छ। जसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर देखाउन थाल्छ। जसलाई हामी शारीरिक समस्या भन्छौं।
निन्द्रा नलाग्ने, वेचन हुने, डराउने तथा विभिन्न किसिमका समस्या आउन सक्छन्। मानसिक तनावले युवा वर्गलाई प्रभावित गरिरहेको छ। त्यसमा पनि उच्च रक्तचाप समस्या भएको पाइएको छ। ५–६ महिना नर्मल रक्तचाप भएको व्यक्तिमा पनि कामको बढी तनाव, आर्थिक अभाव, पारिवारिक समस्या जस्ता कारणले रक्तचाप बढेको हुन्छ। त्यसैगरी, मुटुको घड्कन बढ्ने, स्वाँ–स्वाँ हुने, आत्तिने, निन्द्रा नलाग्ने जस्ता विभिन्न किसिमका समस्या देखिनथाल्छन्।
यसको सीधा सम्बन्ध मुटुसँग हुन्छ। किनभने तनावले शरीरमा विभिन्न किसिमका हर्मोन उत्पन्न हुन्छन्। त्यो हार्मोनको सीधा असरमा मुटुमा पर्छ। तत्काल मानसिक तनावलाई कम गरिएन भने त्यसले ठूलो समस्या पैदा गर्नसक्छ। यस्तो अवस्थामा केही समय औषधि खानुपर्ने हुन्छ। औषधि प्रयोग गरेपछि तनावको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने त्यो औषधि बन्द गर्न सकिन्छ। धेरै केसहरू म हेर्छु। केही समय समस्या भएका केसहरूमा यस्तो निर्णय लिने गरिन्छ। तनावले उच्चरक्तचाप मात्रै बढाउँदैनकी यसले कोलेस्टोलर, सुगर, माटोपनाको समस्या पनि हुन सक्छ।
तनावको कारण के हो? तनावका दुई प्रकार हुन्छन्। एउटा तनाव अरुले दिएर उत्पन्न हुनसक्छ। एउटै आफ्नै कारणले पनि हुनसक्छ। हामीले आफैले गर्ने तनावलाई रोक्न सक्यौं भने पनि धेरै स्वास्थ्य समस्या घटाउन सक्छौं। हामीले समयको व्यवस्थापन राम्रोसँग गरेका हुँदैनौं। एकैपटक धेरै काम गर्नुपर्ने। र, महत्वकाक्षा धेरै हुने बाँनीले तनाव बढ्नसक्छ।
यस्तो अवस्थामा हामीले शरीरलाई आवश्यकता अनुरुप ध्यान दिन सकिरहेका हुँदैनौं। काम गर्ने बेलामा हाम्रो फोकस स्वास्थ्यमा हुँदैन। बरू तनाव थुप्रिदै गइराखेको हुन्छ। जसले हाम्रीभित्र ब्लड प्रेसर, सुगर, मुटुमा असर गरिरहेको हुन्छ। हामीलाई यो जटिलता बढेको थाहा हुँदैन।
यस्तो अवस्थामा हामीले औषधि प्रयोग गर्न सक्छौं। केही समयमा उच्च रक्तचाप वा मुटुको घड्कन बढेको औषधिको प्रयोग गर्न सक्छौं। प्रेसर र मानसिक तनाव बढेको अवस्था मुटुमा असर गर्न सक्छ। त्यसैले तपाई तनावग्रस्त अवस्थामा हुनुहुन्छ र काबुमा छैन भने चिकित्सकीय परामर्श लिएर भएको समस्याको औषधि खान जरूरी हुन्छ।
यस्तो बेला मानसिक समस्याको औषधिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्जाइटी रिलिफ गर्न औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामीले लिमिटेशन गर्न जरुरी छ। त्यो स्पेसेलिष्टको सल्लाह अनुसार मात्रै खानुपर्छ। तनावको जुन कारण छ। त्यो नर्मल कारण हुन्छ। त्यसालाई बुझ्न सकियो भने घटाउन सकिन्छ। काउन्सिल गरेर प्राय यस्ता तनाव स्वत घट्ने र त्यसले गरेका समस्या तुरुन्तै रिलिफ हुने हुन्छ।
तर, यदि तनावलाई तुरुन्तै व्यवस्थापन गर्न नमिल्ने छ भने समस्या समधानको लागि औषधि खानुपर्छ। मानसिक तनाव घटाउनको लागि निन्द्रा राम्रो हुन आवश्यक हुन्छ। निन्द्रा राम्रो भएन भने यसले भित्र-भित्रै तनाव सिर्जना गर्ने हुन्छ। त्यसैगरी, व्यायम गर्नुपर्छ। यदि कोही व्यक्ति नियमित शारीरिक व्यायम गर्छ भने ब्रेनमा विभिन्न किसिमका हर्मोन उपत्पन्न हुन्छ, त्यसले डिप्रेशन कम गर्ने, स्फूर्ति आउने हुन्छ।
खानपानमा शाहाकारी कुराको बढी प्रयोग, आफूलाई मनपर्ने काममा समावेश गर्न, तनावको वातावरणबाट टाढा बस्ने, मनपर्ने साथीभाइसँग समय बिताउने जस्ता काम गर्न सकियो भने अधिकांश व्यक्तिमा मानसिक समस्या घट्छ। मानसिक तनावले मुटुमा समस्या ल्याउछ भन्ने कुरा सोच्नुहुँदैन। किनभने यसले मुटुमै समस्या गराउने सम्भावना एकदमै कम छ। तनावले मुटु रोगको जोखिम भने बढाउँछ। त्यसैले सधै तनाव रहित जीवन बितानुपर्छ।(डा. ओममूर्ति अनिल वरिष्ठ मुटुराेग विशेषज्ञ)
लामालाई फसाउने मुख्य नाइके विश्व लिम्बु, यसरी भयो पर्दाफास (भिडियो सहित)